मगर्नी भाउजूको कथा - Enepal Serofero
पढाइ र जागिर गर्न थालेपछी त बिदै नमिल्ने। गाउँ गएपनी १/२ दिन घरमै बस्यो फर्क्यो।हुन त गाउँमा आजकल केटाहरुपनी पनि कोइ छैनन्। यो पटक दुबैतिर छुट्टी मिल्यो।आफ्नो गाउँ नघुमेको पनि धेरै नै भएछ।
बिहानै बुवाले काम अह्राउनुभयो “उकालो हिड्नै हुन्न खुट्टा दुखिहाल्छ।माथी मगर्नी नानिले दुई हजार रुप्पे दाम लगिथिन्। आज दिन्छु भन्थिन् ,जा त बाबू माथी पुगेर आइज।” गाउँतिर कसैसङ भेट नभाको पनि धेरै भाको थियो। एकाबिहानै एक्लै उकालो लागे। मगर्नी भाउजू राम्री थिइन।दाइ तराइमा गाडी चलाउछन।ड्राइभर हुन।घरमा त्येती आउदैनन।
भाउजू अइले त धेरै नै मोटाएकि रैछन।आगनमा बाख्रा बाध्दै थिइन। “होइन हो भाउजू । बङ्गुरै जस्तो मोटाउनुभएछ के खानुन्छ हो?”
“एक्लै ज्यान बाबू जे खाएपनी मोटाइहालिन्छ नि….आरामै ? कैले आउनुभो?”
“हिजो आको भाउजू” भाउजुसङ्ग जिस्कन मन लाग्यो। “कत्ती मोटाको ? दाइ आएर पनि खान सक्दैनन त एत्रो बङ्गुरको ज्यान त।” “सक्लान नि। .. छ्या बाबू पनि के बङ्गुर बङ्गुर भनेको होला?” बाख्रालाइ घाँस हालेर भाउजू भान्सामा पसिन। “बस्दै गर्नु है बाबू म चिया बसाल्छु।” भाउजुले ग्यास बालिन।
म मोबाइल निकाल्दै बोले ” हैन भाउजू अलि हतार थियो।”
“मेरो हातको चिया खान हुन्न र?” भाउजू हासिन्। “बङ्गुर नै खानु त भनिछैन।”
“काठमाडौ छदा त सुटुक्क खाइन्थ्यो भाउजू बङ्गुर पनि। बाहुनको जात , गाउघरमा खादा त मार्लान नि कुलघरकाले।” भाउजू हास्दै चिया लिएर आइपुगिन। एकछिन गाउँघरकै कुरा भए। भाउजुले दाइका कुरा गरिन। दाइ घर नआएको पनि 6/7 महिना भएको रैछ।
चिया सिया पिएर म पैसा लिएर फर्कन लागे।भाउजू बरन्डातिर लागिन। बाटोनिर म पुग्दा भाउजू बरन्डाको खावोंमा आढेस लगाउदै बोलिन। “सहराँ जस्तो मीठो त नहोला बाबू तै नि गाउँमा पनि सुटुक्क बङ्गुर खान मन लागे आउनु न साझतिर।”
भाउजू मुस्काउदै भित्र गइन। एकछिन अक्क न बक्क बरन्डातिर हेरे र मुस्कुराउदै ओरालो झरें।
Prevशास्त्र भन्छः सुत्ने समय यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्
Nextविदेश बस्ने अधिकांश लाहुरेको श्रीमतीको यौनाङ्ग किन खुकुलो हुन्छ ?
मगर्नी भाउजूको कथा (14,088)